Krete, mambokadzi wemakungwa akanakisa eMediterranean | Kufamba Nhau
Krete, mambokadzi wemhenderekedzo dzakanakisa dzeMediterranean
Mariela Carril | | Greece, Beaches
Zhizha riri kuswedera padyo uye Girisi inoonekwa munzvimbo yekuenda kwevanhu vazhinji vanotova nezororo ravo rakarongwa. Imwe yenzvimbo dzakanakisa sosi ndeye Krete, yakakura uye inogarwa zvakanyanya muzvitsuwa zveGreek.
Tsika yekare, yechitsuwa, nhoroondo refu uye yakapfuma, mahombekombe akanaka, chikafu chinonaka, mimhanzi yakanaka inozivikanwa uye nzvimbo dzakakosha kwazvo dzekuchera matongo dzinozivisa chitsuwa ichi kuti ndiko kwatinoenda nhasi netariro yekuti ichava nzvimbo yatinoenda mangwana ... Tiri sei kuenda kuKrete, tinoitei ikoko uye ndeapi mahombekombe ayo akanakisa:
1 Krete, muMediterranean
2 Nzira yekutenderera sei Krete
3 Crete Mahombekombe
Sezvandareva Crete ndechimwe chezvitsuwa zvakakurisa uye zvine vanhu vakawanda pazvitsuwa zveGreek. Guta rayo guru iguta reHeraklion, iro guta rinoverengerwawo seimwe yeakakura kwazvo munyika. Imwe yemachitsauko ekaresa enhoroondo yakadzokera kumagariro eMycenaean uye matongo eMuzinda weKnossos nemamwe matongo ekuchera matongo akasara kubva panguva iyoyo, asi guta razvino iguta rekare kubvira pakavambwa hwaro kubva muzana ramakore rechiXNUMX.
Heraklion richava suwo rako kuCrete. Pano kune chiteshi chekutengesa uye chiteshi chengarava izvo zvinokuunza iwe kana kukuendesa iwe nekubva kuSantorini, Mykonos, Rhode, Paros, Ios uye chiteshi chePiraeus, muAtene. Kana iwe ukasvika kuGirisi nendege kubva kuAmerica, uchanyatsopinda neAtene, saka unobatanidza nhandare yendege nechiteshi woenda kubva mundege kuenda kuchikepe. Iyo yakanaka ndeyekugara kwemazuva angangoita matatu muguta guru reGreek wobva waenda.
Zvisinei, kana iwe ukasvika muKrete uchibva kunzvimbo dzekuEurope unogona kusvika chaiko se Iyo ine nhandare yenyika. Inowanikwa makiromita mashoma, angangoita mashanu, kubva kuguta, uye mushure meAthens ndiyo inonyanya kubatikana. Ehezve, ndege zhinji dzinoenda kuburikidza neAtene. Nendege dzakachipa zvikuru ndidzo dzendege dzinodhura dzakadai seRyanair kana EasyJet, asi kana iwe ukafamba muzhizha zvinogara zvichikurudzirwa kuti utenge mberi zvakanyanya sezvinobvira nekuti chitsuwa ichi chakakurumbira.
Kune dzimwe nhandare mbiri, haina kukosha zvakanyanya asi zvinokwanisika kuti kubhururuka kwako kunoshandisa imwe yacho. Kune airport yemauto ye Daskalogiannis, muChania, uye iyo ye Hongu tete, iyo inotarisana chete nendege dzekumba. Kubhururuka pakati peHeraklion kana Chania neTesaloniki kunotora maminetsi makumi mapfumbamwe uye Rhode paawa. Kana iwe uchinyanya kufarira unogona kushandisa chikepe asi zvinotora nguva yakareba.
Kune basa rezuva nezuva kubva kuPiraeus mukati megore uye mamwe maviri anowedzerwa muzhizha. Kubva kuSantorini, Mykonos uye zvimwe zvitsuwa zveCyclades zvaunogona kutora kutsanya catamarans. Kune dzimwe nzira dzinobva kuzvitsuwa zviri padyo, asi ndinofunga idzi ndidzo dzinokurudzirwa zvakanyanya kune vashanyi. Kune makambani akati wandei: Anek, Sea Jets, Hellenic Seaways, LANE Lines, semuenzaniso.
Kana iwe uchifamba nemotokari, iwe unofanirwa kubhuka uye zvakafanana kana iwe uchifamba usiku kana mune inokurumidza masevhisi. Unogona kutenga matikiti pamawebhusaiti emakambani (Iwo anowanzo akachipa pane ekutsvaga injini), uye kune mitengo yakasiyana maererano nechikamu uye chinhambwe chekufamba. Kana iwe uri mudzidzi, bvunza nezve zvakaderedzwa.
Nzira yekutenderera sei Krete
Kutanga zvinofanirwa kutaurwa kuti pamusoro peHeraklion kune mamwe maguta akakosha: Chania, Lassithi, Rethymno, Sitia, Agios Nikolaos uye Ierapetra. Kufamba-famba pachitsuwa pane basa rekufambisa rakagadzirwa mabhazi. Iyo yakachipa uye isinganetsi, kunyangwe iwe ungamhanyira mubhazi rinobuda munzira ndokupinda mumusha nekuti munhu wepanzvimbo anozvikumbira. MuHeraklion kune maviri epakati mabhazi emabhazi uye imwe yacho inoisa masevhisi KTEL (iro bhizinesi rebhazi boka).
Imwe sarudzo ndeiyi kurenda mota Asi ramba uchifunga kuti makadhi echikwereti haawanzo kugamuchirwa pamagaraji egasi, vanhu havaremekedze zvikwangwani zvemumigwagwa zvakanyanya, vatyairi vemuno vane hukasha munzira yavo yekutenderera uye kupaka mumaguta kushoma. Zvakare kune matekisi asi kana bhajeti yako ishoma handikurudziri nekuti ibasa rinodhura. Kune matekisi kwese kwese, hongu, uye miviri miviri: masikati neusiku.
Krete ine mahombekombe mazhinji. Kune mahombekombe muChania, Heraklion, muRethymnon, muLassithi, Hersonissos uye kunyange mamwe matunhu emhenderekedzo. Mvura inodziya muzhizha, pakati pe 26 ne 27ºC muna Chikunguru uye 20ºC muna Chivabvu. Ivo havatombotonhora zvakanyanya saka kune vanhu vanodaro zvinokwanisika kushambira gore rese. Mahombekombe akadzikama ane mvura inodziya aya ari kumahombekombe ekuchamhembe. Ivo zvakare vane varindi vehupenyu. Ehezve, mhepo dzakasimba uye dzinogadzira mafungu saka kana iwe usina ruzivo mukushambira mugungwa ... chenjera!
Mahombekombe egungwa rekumaodzanyemba anogara aine vashanyi vashoma uye ndosaka vamwe vanodzika misasa vachivasarudza kuti vamise matende avo, kunyangwe zvisingabvumirwe. Ose ari maviri mahombekombe uye imwe, kana iro gungwa rakarongeka, unogona kubvarura zvigaro uye amburera kwemaviri pakati pe5, 6 kana 7 euros. Izvo zvinosarudzika, kunyangwe zvichiratidzika kwauri kuti amburera dzinotora chitsuwa chose panogara paine nzvimbo yemahara uye yemahara yekugarisa.
Mahombekombe eKrete akachengeteka nekuti hapana mhuka dzine njodzi. Kune mamwezve emahombekombe emasikirwo, kunyangwe nudism haina kutenderwa zviri pamutemo, inoregererwa. Izvo hazvigoneke kugadzira rondedzero yemabhichi akanakisa muKrete nekuti pane zvakawanda, asi kusarudzwa kwangu uye kwevanhu vazhinji ndiko kunotevera:
Balos: Iyo yakanaka yakavhurika pamhenderekedzo, ine chena jecha uye turquoise mvura. Inosvikwa nemotokari kana chikepe, asi hapana bhazi kana vanonunura. Hapana mumvuri wechisikigo asi amburera uye deckchair zvinoroja. Ndiyo kumahombekombe nudism ane ushamwari mvura yakaderera. Iri muChania.
Elafonisi: zvakare muChania, igungwa rinowanikwa zvakanyanya nekuti unogona kusvika ikoko nechikepe, bhazi, mota kana netsoka. Jecha jena, akadzikama mvura, inoshivirira nudism, vanhu vari kufura, vanhu vese vanofarira iyo Mureza webhuruu.
Vai: Iyo yakanaka pamhenderekedzo muLassithi, yakakomberedzwa nesango hombe remichindwe muEurope. Zviuru zvishanu zvemiti!
Preveli: igungwa muRethymno rine rwizi runoyerera kupinda mugungwa, rwakanaka kwazvo. Iyo inotoumba mhando yegungwa pedyo negungwa iro rakanakira kushambira.
Muuraye: iro rakakurumbira pamhenderekedzo muHeraklion. Ndiyo hippie beach nemapako nenzvimbo dzvuku. Iri igungwa rakarongeka uye zhizha rega rega rinotambira rakakurumbira Mumhanzi mutambo.
Agiofarango: Iri igungwa riri pamuromo weAgiofarago Canyon, nemapako nemapako padyo. Kune chapel yeSan Antonio padyo nerukova iyo inodururira mugungwa, yakanaka kumvura yekunwa kana kupisa kuchipisa pamhenderekedzo. Iwe unosvika chete nekufamba kubva mugomo kana kuburikidza necanyon kana nechikepe.
Dunes reSan Pavlos: zvinotariswa imwe yemahombekombe akanakisa muKreteIine mvura inodziya uye vanhu vanouya kuzotsvaga zvakavanzika. Unogona kungosvikako netsoka kana nechikepe, hapana mumvuri wechisikigo asi unogona kukwereta amburera.
Funga izvo Krete ine anopfuura makiromita chiuru emhenderekedzo yegungwa saka hapana makumi asi mazana emahombekombe, inozivikanwa, inozivikanwa, yakavanzika, yakazvimiririra. Kubva pane zvese uye nezvese zvido. Kana iwe usisina nguva yekuenda zhizha rino, funga chitsuwa cheiyo inotevera kana pamwe kune imwe mwaka. Iyo mwaka wakaderera kubva munaNovember kusvika Kurume, mamiriro ekunze akasununguka, kana iyo pakati pemwaka inova kubva munaKubvumbi kusvika Chikumi uye kubva munaGunyana kusvika Gumiguru uye inotipa mamiriro ekunze akanakisa ekufamba musango.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Beaches » Krete, mambokadzi wemhenderekedzo dzakanakisa dzeMediterranean
Wales: Mutauro uye Chitendero
Marathon anonyanya kufarira uye anodhira pasi